Matipi makumi maviri ekutyaira E-Commerce Shanduko ino Mwaka weZororo | Martech Zone
Iyo wachi iri kutekenya, asi haina kunonoka kune e-commerce vanopa kuti vagadzire avo saiti kutyaira kwakawanda kutendeuka. Iyi infographic kubva kune ekushandura optimization nyanzvi pa zvakanaka inoisa 17 matipi akasimba ekugadzirisa ayo iwe aunofanirwa kunge uchitevedzera nekukasira kana iwe uchitarisira kuwedzera pamari yekutenga yezororo mwaka uno.
Kune matatu matatu akakosha marongero aunofanirwa kugara uchiendesa ayo anoratidzwa kuti anogara achityaira dzimwe shanduko dzevatengi vezororo:
71% yevatengi vezororo vanokwezva kutakurirwa mahara
48% yevatengi vezororo vanokwezva kudzoka kuri nyore
44% yevatengi vezororo vanokwezva mutengo unoenderana
17 Yekuwedzera Zororo Ecommerce Matipi Ekushandura
Kurudzira zvaunopa pane epamusoro mazuva ekutenga zororo - kusanganisira Zuva Rekutenda, Nhema Chishanu, Cyber ​​Muvhuro, Green Muvhuro, uye Mahara Kutumira Zuva.
Upsell uye kuyambuka-kutengesa kuwedzera avhareji kukosha kukosha - funga zvinopihwa sekutumira mahara nekutenga kwako, zvigadzirwa zvemabunda, zvinopa mashoma nguva inopa uye nezvimwe.
Hazvidi kunyoreswa pakubuda - vatengi vanofanirwa kuzadza boka reruzivo rwakawanda vanogona kusiya ngoro yavo.
Gadzirira nharembozha - vamwe vatengi vari kutsvagisa pane avo mafoni. Kana iwe usati wakagadzirira, iwe ucharasikirwa.
Ita shuwa mapeji anotakura nekukurumidza - ecommerce masaiti anowanzoona rekodhi traffic mukati menguva yezororo. Usarege kunonoka kana kuputswa webhusaiti kukuvadza bhizinesi rako.
Wedzera email frequency - vashanyi vako vakagadzirira kutenga mukati memwaka wezororo. Usapotsa mukana wako.
Shongedza! - ipa yako saiti yakakodzera festive inzwe kukwidziridza ruzivo rwekutenga. Kunyangwe zvirinani, shandisa kuseka kuti vakuyeuke iwe.
Gadzira yako email runyorwa nechipo - shandura vashanyi vakawanda kuve vanogara. Ongorora mutengo wako wevatengi wekuwana uye funga kusanganisira chipo chepachena chekuita vashanyi vatsva.
Gadzira pfungwa yekukurumidzira - mazuva ekupedzisira ekutumira uye kutengeswa kwemagetsi zvinogona kuumba pfungwa yekukurumidzira iyo inobatsira vashanyi vazhinji kutendeuka nekukurumidza.
Ita kuti zvikwereti zvioneke - ongorora nzira dzakasiyana dzekumisikidza yako discounts. Unofanirwa here kubvisa 50%, $ 25 kubvisa, kana kutenga imwe kuwana imwe yemahara?
Ipa rutsigiro rwemhando yepamusoro rwevatengi - chaiyo-nguva mutengi rutsigiro kuburikidza nehupenyu kutaurirana, zvemagariro midhiya, kana foni zvinogona kubatsira kukunda zvipingamupinyi pakutenga pawebhusaiti yako.
Gadzira makadhi echipo ave nyore kutenga - kana mushanyi asina chipo chakakwana zano, makadhi echipo inzira huru. Ita kuti zvive nyore.
Shandisa chirongwa chekuvimbika kuvadzosa - kudzosa kota yako yechina mutengi kunogona kubatsira kutyaira kutengesa panguva inononoka yekutanga kota.
Ipa zvipo zvakakosha mukutsinhana kweongororo - ongororo dzinogona kubatsira kutyaira shanduko gore rese. Tora mukana wako wepamusoro traffic kuwedzera wongororo pane zvigadzirwa zvako.
Govera yemahara kudzosa kutumira - mutemo wekudzosa une rupo unozoisa kuvimba kwevatengi uye kudzosa vatengi kunyangwe mushure mezororo.
Vabatsire kuzviita ivo pachavo - ita kuti zvive nyore kune vatengi vako kuisa katsamba nekutenga pane chero zvipo.
Govera wakasununguka chipo kuputira - kana iwe uchipa chemahara kuputira chipo, unenge uchisunungura musoro wevatengi. Kunyanya kutemwa nemusoro kwaunosunungura, zvakanyanya mukana wekuita newe.
Heano akazara ecommerce infographic kubva pane zvakanaka
Tags: Budatengesa-tengesakasitoma rutsigirokukanganisae-commerce infographice-commerce matipiecommerce kutendeuka kugadzirisaecommerce matipieemail frequencykusununguka kusunungukakutakurirwa maharachipo makadhichipo chemunhukupukuta kwechipoemail yezororomazuva ekutenga zororopurogiramu yokuvimbikam-commercemcommercekutengeserana kwenharemobile optimizationnhamba yepamusoro yekutenga mazuva ezororoPersonalizationkunyoresakutumira kunodzokaupsellkukasira
Chinyorwa chinobatsira kwazvo nekuda kwekugovana nesu.